ဘာသာရေး၊ ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့၏ဆက်နွှယ်မှုကဘာလဲ။ (2019) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ယာနျဘာသာတရားကို, ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်ကျော်အချိန်များထဲတွင်အဆိုပါဆက်ဆံရေးဆိုတာဘာလဲ (2019)
Maddock, Meghan E. , Kaitlin သံမဏိ, Charlotte R. Esplin, အက်စ်ဂါ Hatch, နှင့် Scott R. Braithwaite ။
လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (2019): 1-28 ။
ယခင်လေ့လာမှုများဘာသာရေးကလူ nonreligious လူတွေကိုပြဿနာအဖြစ်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိဖို့ထက်ပိုပြီးများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့6လ longitudinal လေ့လာမှု, ကြှနျုပျတို့စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အပြန်အလှန်အလားအလာပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ6လကြာပြီးနောက်နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြဿနာခဲ့တာသဘောထားအမြင်မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်ရှိမရှိခန့်မှန်းခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ TurkPrime.com ကနေအရွယ်ရောက်တဲ့နမူနာစုဆောင်း (3 လအတွင်း postbaseline တိုင်းတာ) ။ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအချက်များပါဝင်သည်ကြောင်း Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းတာဆောက်လုပ်ထားခြင်းနှင့်အတည်ပြု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆဆန့်ကျင်, ယာနျဘာသာတရားကို Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ လူတို့သညျအဘို့, အခြေခံမှာယာနျဘာသာတရားကို6လအတွင်းမှာပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအဘို့,3လအတွင်းမှာအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု6လအတွင်းမှာတိုးချဲ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လူတို့သညျအဘို့, အခြေခံမှာစိတ်ကျရောဂါ3လအတွင်းမှာ Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မိန်းမတို့အဘို့,3လအတွင်းမှာပိုမိုမြင့်မား Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းနှင့်6လအတွင်းမှာပိုမိုမြင့်မားစိတ်ကျရောဂါခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်စိတ်ကျရောဂါ, ဘာသာရေး incongruence နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏သီအိုရီ၏အလင်းထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ Self-ရိပ်မိအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့် Self-ရိပ်မိအဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ်, ယာနျဘာသာတရားကို, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့် Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတို့တွင်ဆက်ဆံရေးလေ့လာ
6 လအတွင်း compulsive အသုံးပြုမှု။ ကျနော်တို့ကပိုဘာသာရေးကလူတစ်ဦးပြဿနာလမ်းနှင့်3လအတွင်းမှာ Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြသူတွေကို6လအတွင်းမှာပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသတင်းပို့မယ်လို့ညစ်ညမ်းသုံးပြီးအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရိပ်မိဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆ။
ယာနျဘာသာတရားကိုမဟုတ်သလိုအခြေခံမှာယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအပြန်အလှန်ကိုလည်းမ3လအတွင်းမှာ Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ဒီနမူနာထဲမှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူကပိုဘာသာရေးလူတွေအလွန်အကျွံလှူညစ်ညမ်းသုံးပြီးအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုရန်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသူကိုလျော့နည်းဘာသာရေးကလူအဖြစ်အညီအမျှအမျှဖွယ်ရှိအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည်, ကောက်ချက်ချ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဘာသာရေးကလူ nonreligious လူတွေညစ်ညမ်းစေရန်အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်အဖြစ်စွဲညစ်ညမ်းသုံးပြီးအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရိပ်မိဖို့ထက်ပိုပြီးများပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းယခင် Cross-Section လေ့လာမှုများနှင့်အတူကွဲလွဲနေသည် (Bradley et al, 2016; ။ Grubbs, Exline et al, 2015 ။ ) ။ ဒါဟာစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု Cross-Section related ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်သို့သော်စျယာနျဘာသာတရားကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိပ်မိ၏ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာတရား၏အတိုင်းအတာမှာအမူအကျင့်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းသုံးခုတွင်တိကျသောဘာသာရေးအပြုအမူများ (ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတက်ရောက်ခြင်း) တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းထားသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများသို့မဟုတ်သီးခြားဂိုဏ်းဂဏများနှင့်ဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုအလေးထားသည့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသည်မိမိကိုယ်ကိုပြceivedနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရေးဂိုဏ်းဂဏကွဲပြားမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားစွာသင်ကြားပေးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်အခြားသောဂိုဏ်းဂဏများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပိုမိုလက်ခံလာခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည် (Patterson & Price, 2012; Sherkat & Ellison, 1997)၊ ကိုယ်တိုင် - ရိပ်မိပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှု။ အနာဂတ်ဘာသာတရားဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုတိကျစွာဘာသာတရားများနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာသာရေးအပြုအမူများထက် ပို၍ အရေးကြီးသောဘာသာရေးအတိုင်းအတာဖြစ်နိုင်သည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
Perry ရဲ့ (2017a, ခ) ဘာသာရေး incongruence သီအိုရီအရ, ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုကိုအသုံးပြုဖို့သူအဘာသာရေးကလူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောဒုက္ခဆင်းရဲတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သူတို့ဘာသာရေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ညစ်ညမ်းသုံးပြီးကိုယ်ကျင့်တရားကြောင်းကိုယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရိုးရိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြစ်ပြဿနာကသူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြည့်ရှုရန် ပို. မဟုတ် မှားယွင်းနေ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာပိုမိုဘာသာရေးကလူညစ်ညမ်းသုံးပြီးကိုယ်ကျင့်တရားကမှားကြောင်းကိုမယုံတာဖြစ်နိုင်တယ်, ဘာသာရေး incongruence တွေ့ကြုံခံစားနှင့်လျော့နည်းဘာသာရေးကလူ Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့ဖို့ထက်ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ကိုအသုံးပြုကြောင်း Archive data တွေကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယျကငျြ့တရားလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဒီရှင်းပြချက်မှန်းဆရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. တက်ရောက်လာသူများကို '' ယုံကြည်ချက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မပါဝင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးမရှိခြင်းအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စျယာနျဘာသာတရားကို၏ထုံးစံစကေးကိုအသုံးပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာများတွင်စျယာနျဘာသာတရားကို၏ဖြန့်ဝေ (က Histogram အဘို့ပုံ3ကိုကြည့်ပါ) အတန်ငယ် bimodal ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနမူနာထဲမှာစျယာနျဘာသာတရားကို၏ဤဖြန့်ဖြူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပြီး, ရလဒ်များကိုစျယာနျဘာသာတရားကိုပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးနောက်တော်သို့လိုက်ရာနမူနာများတွင်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့။ မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်, ဒီနမူနာစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့ခဲ့ကြသည်။
၆ လအကြာအမျိုးသားများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာတရားသည်ယောက်ျားများအတွက်မဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီးများအတွက်မဟုတ်ဘဲအမျိုးသားများ၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း၊ ဤတွေ့ရှိချက်သည်ပယ်ရီနှင့်ရှယ်လီဖာ (၂၀၁၇) မှသုတေသနပြုမှုနှင့်ကိုက်ညီပြီးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လူဖြူအမျိုးသားများအတွက်သာဖြစ်ပြီးအရောင်ရှိအမျိုးသားများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်ဘာသာရေးယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော်အခြားသုတေသနများကဘာသာရေးယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုနည်းပါးသည် (Perry & Schleifer, 6; Short, Kasper, & Wetterneck, 2017) သို့မဟုတ်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည် အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း (Goodson, McCormick, & Evans, 2017) ။ 2015 လတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှု၏အခြေခံဘာသာတရားနှင့်ကြိမ်နှုန်းအကြား bivariate ဆက်စပ်မှုသည်ယောက်ျားများအတွက်အပြုသဘောဆောင်ခဲ့သည် (r was.2000, variable ကိုအကြားဆက်စပ်မှုအားလုံးအတွက်ဇယား ၆ တွင်ကြည့်ပါ)၊ ဖိနှိပ်မှုသည်မဖြစ်နိုင်သည့်ရှင်းပြချက်ဖြစ်သည် (Maassen & Bakker, 6) ။ အမျိုးသားများအနေဖြင့်၊ ဘာသာရေးအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေများပြားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုမြင့်မားသောဘာသာတရားများကကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများမှာရှင်းလင်းစွာမသိရသေးပေ။ ဘာသာရေးယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအစားထိုးအဖြစ်အစားထိုးခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပိုမိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနမှဘာသာတရားသည်မိန်းမများထက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးအချို့သောနမူနာများတွင်ဘာသာတရားနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်အရ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ သုံး၍ သုံးစွဲသောအချိန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအား ၃ လတွင်အလွန်အမင်းသို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မပြုမူသည်ဟုခံစားရသည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်စပ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့်အချိန်ပမာဏနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ လူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်အချိန်သိပ်မပေးရဘဲအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးအပြာစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်များစွာဖြုန်းတီးသူများသည်သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အကျွံ (သို့) အတင်းအဓမ္မကြည့်ရှုသည်ဟုမယုံကြည်နိုင်သည် (Gola et al ။ , 3) ။ ဤရလဒ်သည်ယခင်တွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူကူးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုနှင့်မိမိကိုယ်မိမိပြperနာရှိသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်အရေအတွက်သည်ကွဲပြားသောဆောက်လုပ်ရေးများဖြစ်သည် (Grubbs, Wilt, Exline, Pargament, & Kraus, 2016; Grubbs et al, 2018; ။ Vaillancourt-Morel et al ။ , 2010) ။
အခြေခံတွင်ပိုမိုစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသောအမျိုးသားများသည် ၃ လတွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွန်အကျွံ အသုံးပြု၍ ၆ လတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုတင်ပြရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများကိုယာယီ ဦး စားပေးမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမိမိကိုယ်မိမိအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုသည့်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည် (Grubbs, Stauner et al ။ , 3) ။ အခြေခံတွင်ပိုမိုစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသောအမျိုးသားများသည်ပြmonthsနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကို ၃ လတွင်ထောက်ခံရန်နှင့် ၆ လတွင်ပိုမိုစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုအစီရင်ခံရန်အတွက်များသောအားဖြင့် Joiner ၏စိတ်ကျဝေဒနာသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုပိုဆိုးစေပြီးပိုမိုဆိုးရွားစေတဲ့အပြုအမူများ (Joiner, Metalsky, Katz, & Beach, 6; Joiner & Metalsky, 2015) ။ စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများပိုများသောအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသူတို့ပြasနာအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးပိုမိုထိရောက်သောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။
Self- ရိပ်မိပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအခြေခံကျသောစိတ်ကျဝေဒနာသည် ၃ လတွင်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်အမျိုးသမီးများစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများမပြမီမိမိကိုယ်မိမိပြselfနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုယာယီ ဦး စားပေးဖော်ပြသည်။ တနည်းအားဖြင့်အခြေခံတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြသောအမျိုးသမီးများသည် ၃ လတွင်မိမိကိုယ်ကိုပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုတင်ပြရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်း၍ မဖြစ်သော်လည်း ၃ လတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောမိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုတင်ပြသောအမျိုးသမီးများသည် ၆ လတွင်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများပိုမိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုပြasနာအဖြစ်ရှုမြင်သောအမျိုးသမီးများသည်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများရှိနေပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုမလုပ်နိုင်ပါ။ အလားတူစွာ၊ ၃ လတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုသည်အမျိုးသားများအတွက် ၆ လတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီလူတစ် ဦး သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုသည်ဟူသောခံစားချက်သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Corley & Hook, 3; Grubbs, Stauner et al ။ , 3) ; Patterson & စျေး, 3; ပယ်ရီ, 6b) ။
မိမိဘာသာပြceivedနာရှိသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကို ၃ လတွင်တင်ပြသောအမျိုးသမီးများသည် ၆ လတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုနည်းသည်။ ကိုယ်တိုင် - ရင့်ကျက်သောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုသည်ယောက်ျားများတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်သောပြcontraryနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အမျိုးသားများ (အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောတွေ့ရှိချက်) နှင့်ဆန့်ကျင်သည် (Kohut &? Stulhofer, 3) ။ သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုပြaticနာဟုရှုမြင်သောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအကြိမ်ရေလျော့ကျသွားနိုင်သည်။ ဒီရှင်းပြချက်ကမှန်းဆပေမယ့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းစံများ၊ မီဒီယာများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံများမှလူများလေ့လာသင်ယူသောဇာတ်ညွှန်းများသို့မဟုတ်ပုံစံများကလွှမ်းမိုးသည်ဟုဆိုထားသည့်လိင်ဇာတ်ညွှန်းသီအိုရီနှင့်အညီဖြစ်သည် (Gagnon & Simon, 6) ။ လိင်မှုကိစ္စများကိုလိင်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ယောက်ျားများထက်လိင်မှုကိစ္စနည်းသည်၊ လိင်မှုကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်ရန် ပို၍ သတိကြီးစွာနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ် ၀ င်စားမှုနည်းသည် (Garcia & Carrigan, 2018; Wiederman, 1973) ။ လိင်ဇာတ်ညွှန်းသီအိုရီအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပြproblemနာအဖြစ်ရှုမြင်သောအမျိုးသမီးများသည်လိင်ကွဲပြားမှုရှိသည့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများနှင့်သူတို့၏အပြုအမူများအကြားပconflictိပက္ခကိုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိပြီးသူတို့၏အပြုအမူကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလိင်ဇာတ်ညွှန်းနှင့်အညီပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းများသည်အမျိုးသမီးများအဘယ်ကြောင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပြproblemနာရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသောအမျိုးသားများမဟုတ်ကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်ပြီး ၃ လအကြာတွင်အပြာစာပေအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေလျော့နည်းသွားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြေခံမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency မိန်းမတို့အဘို့, ဒါပေမယ့်မရလူတို့သညျအဘို့အ6လအတွင်းမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမဟုတ်တော့ကာလအတွင်းယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောမဖြစ်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့6လအချိန်သုံးနေပြီအတွင်း, အတိတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမိန်းမတို့အဘို့အနာဂတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကောင်းဆုံးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျား '' လျော့နည်းတည်ငြိမ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနဲ့ Episode သို့မဟုတ်အခြေအနေ-မှီခိုဆက်ဆံရေးအတန်ငယ်ပိုပြီးအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အထီးပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားအထီးထီးနေခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်မည်သို့ Seidman ရဲ့ (2004) ဖော်ပြချက်များကရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ယောက်ျား '' အခွအေနေ-မှီခိုအသုံးပြုခြင်းကိုသူတို့တစ်ဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ကိုသိသည့်အခါသာညစ်ညမ်းသုံးပြီး၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Seidman ရဲ့ရလဒ်တွေကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသူတို့ရဲ့ Partner လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုး (Seidman, 2004) မှချည်ထားသောဖြစ်ပါတယ် '' အမျိုးသမီးကြောင်းညွှန်ပြ, သဘောသဘာဝတွင်ပိုမို relational အဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို '' အမျိုးသမီးဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုပေးထားပါက "ရိုကဲ့သို့သော" အမျိုးသမီး-တစ်ခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်မိတ်ကပ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်တံဆိပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အထီးအဘို့, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယောင်းနှင့်ဆုတ်လေ့နှင့်တစ်ခုခြုံငုံရို၏ညွှန်ပြမဟုတျပါဘူး။